Uqina thambo kweyomhlaba eJapan – Bayede News
Konke sekumi ngomumo eJapan ukuba ziqale
Posted on 16/09/2019 16/09/2019 by Bayede-News
Iqembu lebhola lombhoxo elizomela iNingizimu Afrika kweyomhlaba eJapan Isithombe: SA Rugbymag
Konke sekumi ngomumo eJapan ukuba ziqale zidudulane kunqobe engagobi phondo
AKUZINSUKU ezingakanani ezisele ngaphambi kokuthi kuqale iNdebe YoMhlaba yombhoxo, ezobanjelwa eJapan. Lokho kusho ukuthi wonke amazwe asewulungele umhla zingama-20 kwephezulu okuwusuku lapho kuzoqala lo mqhudelwano, okulindeleke ukuba usongwe mhla zimbili kuLwezi.
Yize wonke amazwe azobe eyingxenye yalo mqhudelwano ezofuna ukuwunqoba, kodwa iqiniso lithi emazweni angama-20 lilodwa elizoba yingqwele.
Izwe okuyilo elingenzeka li nqobe lo mqhudelwano lingaqhamuka kwamahlanu akleliswe phezulu. Kula mazwe aphezulu iNew Zealand, i-Ireland, i-England, iWales kanye neNingizimu Afrika.
Umlando wamazwe amahlanu aphezulu
INew Zealand muva nje ikleliswe phezulu emhlabeni. Leli lizwe kulo mdlalo lingelisatshwayo, njengoba lino mlando omuhle. Emiqhudelwaneni yeNdebe Yomhlaba eyasungulwa ngowe-1987, kweyisi-8 esidlaliwe awukho nowodwa engakaze ibe yingxenye yawo. Isibe ngompetha kathathu ngonyaka we-1987, kwaba unyaka wezi-2011 nangonyaka wezi-2015. Leli lizwe eliteketiswa ngokuthi i-All Blacks liya kulo mqhudelwano lizobe liqeqeshwa uSteve Hansen, kanti ozobe engukaputeni walo uKieran Read. UHansen uyena owayeqesha ngonyaka wezi-2015 ngesikhathi i-All Blacks inqoba esomhlaba.
Leli qembu lizimisele ukuqopha umlando linqobe isicoco somhlaba kathathu kulandelana okuyinto engakaze yenzeke selokhu kwathi nhlo.Izobe iseqoqweni B lapho kukhona iNingizimu Afrika, iNamibia, iCanada kanye ne-Italy.
Abadlali ababhekiwe ukuthi basize leliqembu liqophe umlando
URead ngokwemidlalo aseyidlalile kukhombisa ukuthi unesipiliyoni, usedlale eli-121. Abanye uSam Whitelock osedlale imidlalo eli-111 no-Aaron Smith osemele leli qembu emdlalweni engama-88.
I-Ireland ayinawo umlando otheni kodwa nayo iyafana neNew Zealand isibe yingxenye kuyona yonke imiqhudelwano yeNdebe YoMhlaba. Okubuhlungu ukungena kwayo igcina kumaquarter-finals, ngonyaka wezi-2007 yaphuma kowamaqoqo.
Kubukeka kulo nyaka izokwenza kahle njengoba cishe unyaka wonke bekuyiyo ebikleliswe phezulu, muva nje isendaweni yesibili. Ngokwamaqoqo iseqoqweni A, lapho iqhathwe neScotland, iJapan engosokhaya, iRussia kanye neSamoa.Izoya kulo mqhudelwano iqeqeshwa uJoe Schmidt, kanti ukaputeni kuzobe kunguRory Best.
Abadlali engathembela kubona
UJonathan Sexton odlala njengefly-half isipiliyoni anaso sikhulu kakhulu njengoba eselidlalele iminyaka eli-10 lelizwe. Abanye abadlali uRob Kearney oyifull-back, kanye noCian Hea oyiprop.
I-England iyiqembu elinganakekile kodwa ingawudala umonakalo, iphinde eyakwenza ngowezi-2003 ibhaxabula i-Australia ezweni layo kowamanqamu ngamaphuzu angama-27 kwali-17 yanqoba iNdebe YoMhlaba emlandweni wayo. Leli qembu elikleliswe endaweni yesithathu emhlabeni lizoholwa u-Eddie Jones ongumqeqeshi walo, liseqoqweni C lizobe libhekene neziqu zamehlo neFrance, i-Argentina, i-United State neTonga.
Ngenxa kobukhulu kwalo mqhudelwano abadlali abanesipiliyoni ibona abazoba ithemba layo. Kulabo badlali sibala uBen Young osedlale imidlalo engama-89, uDan Cole yena osedlale engama-86 no-Owen Farell osedlale imidlalo engama-70.
IWales ayinawo umlando otheni, kodwa muva nje ikhombise ukuvuthwa njengoba ikleliswe endaweni yesine emhlabeni. Ingompetha beSix Nations Championship edlalwa amaqembu ayisithupha ahamba phambili ezwenikazi i-Europe. Akukhona okokuqala iba yingxenye yeNdebe YoMhlaba, yabakhona ngowe-1987, ingonyaka we-1999, kwaba unyaka wezi-2011 nangowezi-2015. UWerren Gatland ongumqeqeshi uyena ozobe ebhekiwe njengoba aqala ukuqeqesha leli qembu nganyaka wezi-2007.
Ifly-half uDaniel Rhy Bigger ungomunye wabadlali abazobe bengaqali ukudlala iNdebe YoMhlaba, njengoba ayekhona ngowezi-2015. Nangonyaka wezi-2011 wayezoba khona kodwa ngenxa yokulimala wahoxa. Usedlale imidlalo engama-72 wathola amaphuzu angama-351. Nesipiliyoni sikakaputeni u-Alun Wyn Jones, waqala ukumela leli lizwe ngonyaka wezi-2006 usedlale imidlalo eli-127.
INingizimu Afrika iza kulo mqhudelwano nokukhulu ukuzethemba njengoba ngoNtulikazi inqobe umqhudelwano weRugby Championships, lapho kade ibhekene namazwe amane okuyiNew Zealand, i-Australia kanye ne-Argentina. Okunye okuqinisa idolo leli qembu eliqeqeshwa uRassie Erasmus ukuthi kulo nyaka induku yinto elingayazi.
Abadlali ezothembela kubona:
USiya Kolisi ongukaputeni okubhekwe ukuba ahole leli qembu ukuthi liphumelele. UTendai “Beast” Mtawarira isipiliyoni anaso sibhekwe kakhulu ukuba sisebenze njengoba esedlale imidlalo eli-110, kube uMakozole Mampipi osefomini ngeledlule ushayele aMabhokobhoko amathrayi amathathu kade edlala owobungani neJapan agcina enqobe ngamaphuzu angama-41 kwayi-7.
AMabhokobhoko uma engawunqoba lo mqhudelwano kobe sekusho ukuthi awunqoba okwesithathu. Awunqoba ngonyaka we-1995, nangonyaka wezi-2007. Elinye iqembu okungenzeka libe ingozi i-Australia ekleliswe endaweni yesi-6 emhlabeni, nayo ingelinye lamazwe eseliwunqobe kabili lo mqhudelwano. Yawunqoba ngowe-1991 nangonyaka we-1999.